Budata FlashFire APK maka Android
Free Budata maka Android (11.00 MB)
FlashFire bụ ngwa nwelite ngwa ngwa dị na ekwentị Android gbanyere mkpọrọgwụ na mbadamba.
Nihi ngwa a, nke akọwara dị ka ihe na-aga nihu nke ngwa Mobile ODIN, ị nwere ike ịme mmelite ngwa ngwa nke ngwaọrụ gam akporo gị. Mmelite ndị a gụnyere mmelite OTA na ZIP. E kwesịghị ichefu na mmemme a bụ usoro mgbọrọgwụ. Notu oge ahụ, ngwa a na-enyekwa ohere ịkwado ndabere mgbe a na-eme mmelite ndị a niile; Ị nwere ike ịkwado faịlụ ndị dị mkpa na ekwentị gị, kaadị SD ma ọ bụ USB.
Ọ bụ ezie na FlashFire nwere atụmatụ mara mma dị otú ahụ, ọ nwere ike ịbụ mmemme dị ize ndụ iji. Ọ bụrụ na ejighị nlezianya kpachara anya, mfu faịlụ nwere ike ime. Ya mere, tupu i jiri FlashFire, ị kwesịrị ị na-akwado nkwado faịlụ gị dị mkpa ma chekwaa ha ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume. Usoro ihe omume adịghị emerụ Android ngwaọrụ nụzọ ọ bụla.
Nha faịlụ: 11.00 MB